Mistery sy tsiambaratelo, Fiangonana Eran-tany erak'i Switzerland Suisse (WKG)
Nolazain'i Paoly ho mistery nipoitra ireo zavatra rehetra ireo tamin'ny fotoana talohan'i Kristy, fa naseho tanteraka tao amin'i Kristy - ny misterin'ny finoana (1 Tim. 3,16:11,25), ny misterin'ny fanakanana ny Isiraely (Rom. 1:2,7) , ny misterin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona (1,9 Kor. 1), izay mitovy amin'ny misterin'ny sitrapon'Andriamanitra (Efes. 15,51) sy ny misterin'ny fitsanganana amin'ny maty (XNUMX Kor. XNUMX).
Nanoratra toy izao izy ao amin'ny Kolosiana 1,21: 26-1,22: Na ianareo taloha ary mankahala ny asa ratsy aza dia 1,23 1,24 dia efa nihavana tamin'ny fahafatesan'ny vatany mety maty izy, ka dia ho masina izy ary tsy hanan-tsiny sy tsy mety manoloana ny tavany. toerana; 1,25:1,26 raha mijanona amin'ny finoana, miorina ary mafy orina ary tsy miala amin'ny fanantenan'ny filazantsara izay henonao ary notorina tamin'ny zavaboary rehetra ambanin'ny lanitra. Izaho Paoly dia tonga mpanompony. XNUMX Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana izay iaretako ho anao, ary manome ny tenako ny tenako noho ny mbola tsy ampy amin'ny fijalian'i Kristy, ho an'ny vatany, izany no fiangonana. XNUMX Izaho dia tonga mpanomponao amin'ny alàlan'ny birao nomen'Andriamanitra ahy hitory ny teniny aminao betsaka, XNUMX dia ny tsiambaratelo nafenina hatramin'ny taona maro, nefa izao dia naseho tamin'ny olony masina ,
Nanohy i Paoly: ... izay tian'Andriamanitra hampahafantatra ny harena be amin'ity zava-miafina ity amin'ny hafa firenena, dia Kristy ao aminao, fanantenan'ny voninahitra. 1,28:1,29 Izahay dia manontany momba izany ary mamporisika ny olona rehetra ary mampianatra ny olona rehetra amin'ny fahendrena rehetra mba hahatonga ny olona rehetra ho tonga lavorary ao amin'i Kristy. 1,27 Fa io koa dia sahirana sy mitolona amin'ny tanjaky ny miasa mafy ato amiko (Kolosiana 29-XNUMX).
Hafatra momba ny fitiavan'i Kristy ny filazantsara ary ny fomba hanafahany antsika fotsiny amin'ny fanamelohana antsika ary hanova antsika ho sarin'i Kristy. Tahaka ny nanoratan'i Paoly ny fiangonana tany Filipy hoe: Any an-danitra ny zontsika sivily; na aiza na aiza antenaintsika ny Mpamonjy, Jesosy Kristy Tompo, 3,21 hanova ny vatantsika tsy misy dikany, mba ho tonga vatany be voninahitra izy araka ny hery izay ahafahany manolotra ny zavatra rehetra (Fil. 3,20-21 ).
Tena tokony hankalazana ny filazantsara. Ny ota sy ny fahafatesana tsy hahasaraka antsika amin'Andriamanitra. Tokony hovana isika. Tsy ho simba ny vatanay be voninahitra, tsy mila sakafo intsony, tsy ho antitra na ketrona. Hatsangana tahaka an'i Kristy isika amin'ny vatana hery mahery. Mbola tsy fantatra ihany izany. Araka ny nanoratan'i Jaona hoe: Ry malala, efa zanak'Andriamanitra isika; fa izay mbola ho tiana dia tsy mbola nipoitra. Fantatsika anefa fa raha toa miharihary izany, dia ho tahaka Azy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy (1 Jaona 3,2: XNUMX).